कोरियामा अर्को बर्ष १ सय १८ दिन रातो बिदा, सलनाल र छुसकमा कति दिन बिदा? – Eps Sathi
कोरियामा अर्को बर्ष १ सय १८ दिन रातो बिदा, सलनाल र छुसकमा कति दिन बिदा?
August 13, 2021 770
दक्षिण कोरियामा अर्को बर्ष १ सय १८ दिन बिदा हुने भएको छ। यो बिदामा सप्ताहन्तको शनिवार र आइतबारको विदाहरु पनि समावेश गरिएको छ। अर्को बर्षको बिदा यो बर्षभन्दा २ दिन बढि भएको कोरियाको विज्ञान तथा आइसिटी मन्त्रालयले बुधवार जानकारी दिएको छ।
अर्को बर्ष सार्वजनिक विदा अर्थात शनिवार र आइतबारको रातो बिदा बाहेक १९ दिन हुनेछ। तर यि बिदाहरु कतिपय आइतबार पर्ने देखिन्छ। मे १८ तारिख पर्ने बुध्द जयन्ति, सेप्टेम्बर ११ मा पर्ने छूसक, अक्टोबर ९ तारिख पर्ने हाङगुल डे तथा डिसेम्बर २५ माम पर्ने क्रिसमस पनि आइतबार बिदाकै दिनमा परेको छ। यि आइतबार पर्ने बिदाहरुमध्ये छुसक र हाङगुल डे को बिदा भने १ दिन पछि अर्थात सोमबार दिइने भएको छ।
अर्को बर्ष २ दिन विशेष का’रणबस बिदा थपिएका हुन। अर्को बर्षको मार्च ९ तारिखमा दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिको नि’र्वाचन हुने तथा जुन १ तारिख कोरियाको स्थानिय निकायको चु’नाव हुने कार्यक्रम रहेको छ। यि चुनावका दिन पनि कोरियाले सार्वजनिक विदा दिनेछ। त्यसैगरी अर्को बर्षको सलनाल पनि ५ दिनको हुने भएको छ। सलनाल सोमबार देखि बुधवारसम्म परेका कार’ण अगाडीको शनिवार र आइतबारको विदा समेत जोडी जम्मा ५ दिन विदा हुनेछ। त्यसैगरी अर्को बर्षको छुसकमा भने ४ दिन बिदा हुने भएको छ।
Prevचितवनमा बि’रामी जाँच्ने डाक्टरको पढाई चेक गर्दा ८ कक्षा पास
Nextमास्क नलगाई मार्टभित्र छि’रेको अमेरिकनलाई कोरियन आजुमाहरुले थ’र्काएको भिडियो भयो भा’इरल
बस कि ट्रेन? अब दुबै एउटै गाडीमा, जापानले बनायो रेल र बस एउटै गाडीमा
कोरियामा कामदारको चरम अ’भाव भएपछि यि ३ विकल्पमा छलफल हुँदै, भिजा सकिन लागेका कामदारको भिजा थप हुन सक्ने